भिडियोमा हेर्नुस् प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिएका अपहरणकारीको शव र घटनास्थल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भिडियोमा हेर्नुस् प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिएका अपहरणकारीको शव र घटनास्थल
डिसी नेपाल , २१ श्रावण २०७५
काठमाडौं। राजधानीको काँडाघारीबाट आइतबार राती अपहरणमा परेका ११ वर्षका बालक निशान खड्काको हत्या गरिएको छ । उनको शव भक्तपुरको एक घरबाट बरामद भएको छ । प्रारम्भिक जाँचमा उनको घाँटी थिचेर हत्या गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
निशानको खोजी गर्दै गएको प्रहरी टोलीसँग अपहरणकारीको मुठभेड हुँदा २ अपहरणकारी मारिएका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायकको जंगलमा अपहरणकारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएपछि प्रहरीले जवाफी कारवाही गर्दा २ अपहरणकारी मारिएका हुन् । हेर्नुस् भिडियो।